Nin ka tirsanaa maleeshiyaadka Ururka Al Shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay Magaalada Muqdisho, ka dib markii la sheegay inuu ka dambeeyay qarax bambo oo gelinkii dambe ee Axadii lagu weeraray askar ku sugnayd Suuqa Bakaaraha.
Ninkan ayaa waxaa la sheegayaa inuu doonayay inuu dhibaateeyo askar ka tirsan kuwa ammaanka, oo xilligaasi ku sugnaa goobtaasi, balse ay bambadaasi waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ahi.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Soomaaliya, Axmed Maxamed Maxamuud (Sayid Carab) oo Saxaafadda kula hadlay Xarunta Dembi Baarista ee (CID) oo xalay ninkaasi lagu soo bandhigay, ayaa sheegay in bambadii uu tuuray ay ku dhimatay laba qof oo rayid ah, halka saddex kalana ay ku dhaawacmeen.
Hase ahaatee wararka laga helayo Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayan in gelinkii dambe ee shalay la soo gaarsiiyay meydadka afar ruux oo ku dhimatay qaraxa ka dhacay suuqa Bakaaraha.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga ayaa sheegay in Ciidamada Booliska ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan ninkan oo lagu magacaabo Xasan Axmed Cismaan, oo sida uu sheegay ka dambeeyay qaraxaasi.
Afhayeenka ayaa Ciidamada Booliska iyo shacabkaba ku ammaanay inay iska kaashadeen soo qabashada ninkaasi, isagoona reer Muqdisho ku ammaanay inay nabadda u hiiliyeen.
July 5, 2017 tuugahaladilo2015